Semalt Kuongororwa Kwewebhu
Kuita kuti mawebhusaiti ako asvike pakukwanira kwayo hazvisi nyore sezvazvinonzwika. Uye ndine chokwadi chekuti munogona kunge maona kuti pari zvino. Zvinotora kugara uchiongorora, kudhonza matinji, uye kuongororesa kuti uve nechokwadi chekuti uri kuita zvinhu nenzira kwayo. Nguva zhinji kudzokorora kwakadaro kuri nani kana iko kuchiitwa nevarairidzi vane ruzivo rwekuziva zvekutarisa pane webhusaiti yako. Sevamabhizinesi, tine chokwadi chekuti mava nekutenda kuti zviri nani kuti uite zvinhu pachako. Nekudaro, hapana munhu chitsuwa. Kuti uite kuti unzwe zvirinani, uine Semalt, iwe unoziva matanho ese atinotora mukuita kuti webhusaiti yako ive yakanaka.
Saka usafunga nezvazvo paunenge uchiisa yako webhusaiti mukutonga kwedu asi itore seyokubatana. Nenzira iyi, tinogona zviri nani kutamisa chiratidzo chako kune webhusaiti yako uye tivone kuti iwe unogadzira organicate inotungamira
Kuti tinzwisise zvidzidziso zveSEO optimization, tinokukurudzira kuti uongorore yedu saiti kuti udzidze zvimwe. Tine zvakawanda zvemukati zvekudzidza kuti tikubatsire kuziva kuti tingakubatsira sei.
Pano, tinokurukura zvese zvishandiso zvinodiwa pakuongororwa kwakakwana kwemawebhusaiti. Izvi hazvingobatanidze zvako asiwo zvemakwikwi ako. Izvi zvinoongorora kushandiswa kwemashoko akakosha pane webhusaiti yako, uyezve kunongedza mazwi ako akakosha. Isu tinoenda mberi kukuratidza peji rako rekutyaira rekutyaira (ino ndiyo peji inoshanyirwa nevanhu vazhinji), uye tinotarisa nzvimbo yako mumamiriro ekutsvaga.
Kana tikatarisa mukwikwidzi wako, tinofunga zvauri kushaya. Kudzidzira makwikwi emakwikwi kunotibvumidza kunzwisisa zvikonzero zviri kumashure kwehuwandu hwe traffic. Isu tinobva taisa ruzivo urwu kune yako saiti.
Isu tinodada nekutsanangura uye kupwanya zvinhu pasi kuti tikubatsire iwe kunzwisisa. Hatifarire iyo "Ini ndinotarisisa nzira." Panzvimbo iyoyo, tinotora izvi sekubatana. Nenzira iyi, isu tiri vaviri tinosanganisa iwo makemikari mune iyo kemikari lab "nenzira yekufananidza," uye isu hatisiyi zvinhu zvese zvinonakidza kune vadzidzi vane hunyoro.
Nedudziro, SERP inomirira Yekutsvaga Injini Yekutsvaga peji. Aya ndiwo mapeji anoratidzwa neinjini dzekutsvaga kana mushandisi kana mune iyo nyaya Semalt anoikumbira. Chinangwa chekutanga chemhedzisiro iyi ndeye kunzwisisa mashandisirwo emazwi akakosha anoshandiswa pane webhusaiti yako.
SERP ndiyo kadhi webhusaiti yako webhusaiti. Inosanganisira zita remusoro, chinongedzo kune peji rako rewebhu, uye tsananguro pfupi. Tsananguro iyi inoratidza uko mazwi akakosha akaenderana nezviri pane peji. Zvinorehwa izvi ndezvekuti iwe haugone kuve newebhusaiti pane zvigadzirwa zvemotokari, uye mazwi ako makuru ihove, Ocean, Aquarium, etc. iwe unowana poindi yacho. Chero chero mazwi makuru aunoshandisa anoda kuti aenderane nemasevhisi aunopa. Kana zvisiri, webhusaiti yako inoenderera ichikwezva vateereri vasina kunaka.
Nekuda kwemashoko ari mune uyu mushumo, kazhinji inouya mune akati wandei mapeji. Kunyangwe iwe uchigona kudzikamisa izvo zvinoratidzwa, isu tinoda kuenda zvakazara mukati, nekuyambuka yese maT uye kutaridza iyo I.
Mukutarisa iyi mhedzisiro, peji rekutanga rine ruzivo rwakakodzera. Paunenge uchienda kunoperera mushumo, kukosha kwe data irimo kunoderedza kusvika waita pfungwa dzako kuti dzisaenderere mberi. Senge pakushambadzira kana chaiko chero chinhu muhupenyu, zvinhu zvakakosha zvinouya kutanga.
Mukupedzisira, SERP inokuratidza iyo nzvimbo yako webhusaiti inotora mukirasi yemasaiti. Uye sezvo iwe uchigadzira inotungamira organical uchishandisa mazwi akakosha, iwe unosvika kunzwisisa izvo zvauri kuita zvisizvo uye izvo zvauchazoda kugadzirisa. Nekuziva izvo zvisiri izvo, isu tinoziva kwekushandira pane.
Pane zvikamu zvina zveSERP. Tine Paidhi yekutsvaga kushambadzira, organic yekutsvaga mhinduro, yemuno yekutsvaga mhinduro, pamwe nekutsvaga kwakabatana.
Paid yekutsvaga ads: iyi inzira yekuwana inorganic traffic. Pano, iwe unobhadhara Google kugadzirisa iwe webhusaiti yako nekukwevera vataridzi kutarisa kune iyo. Nenzira iyi, yako saiti inowana maonero, asi izvi hazviwanzo kuwana iwe zvinotungamira. Uye, hapana vimbiso yekuti kana iwe ukamira kubhadhara kushambadza idzi, iwe uchaenderera uine traffic yakakwira kune yako saiti.
Zvekutsvaga zvekutsvaga mhinduro: izvi zvine Semalt zvakanyorwa zvese pamusoro pazvo. Apa ndipo paunoshandisa SEO kudhiza traffic kune yako saiti zvakasikwa. Mafuta ekutsvaga anoonekwa akatendeka. Nehunyanzvi hwekushandisa SEO, gig yako inowanzo kuve kumusoro kwemapeji epamusoro eGoogle. Izvi zvinopa webhusaiti yako mukana uri nani wekushandura aya mabhatani kune vatengi.
Mhinduro dzekutsvaga munharaunda: apa, iwe unoona rondedzero, mepu, uye kushamwaridzana kweamabhizinesi ari mukati mekutsvaga radius. Iyo yekutsvaga radius inotemerwa neboka remamiriro ezvinhu uye izvo zvinodiwa nemushandisi. Ichi chikonzero nei zvakakosha kuti makambani aise mukati meGoogle bhizinesi peji.
Tsvagurudzo dzinoenderana. Aya ndiwo mabhokisi madiki aunoona pazasi peji rezvibodzwa mushure mekunge watsvaga chero chinhu. Izvi zvinogadzirwa zvakavakirwa pamazwi akakosha anoshandiswa nemushandi mubhokisi rekutsvaga.
Nekudaro, iyo SERP yemjini yakakura yekutsvaga seGoogle, Bing, uye Yahoo inogona kusanganisira zvinoverengeka zvakavandudzwa mhedzisiro mativi. Izvo zvinosanganisira zvinhu zvakafanana nemhando ye snippet yako, mifananidzo, mepu, tsanangudzo mhinduro bhokisi, nezvimwe.
Uyezve inozivikanwa seMushandi wekutsvaga tambo, iri izwi kana tambo yevashandisi vemazwi nyora mubhokisi rekutsvaga. Unoziva here kuti iwe ungatsvaga sei nezve chero chinhu paGoogle? Zvakanaka, kune dzinoverengeka nzira idzo mushandisi angatsvaga, asi mazwi makuru achiri kuchengetwa.
Asi kana injini dzekutsvaga dzaitsamira pane izvo mushandisi mhando mukati mega, masayiti mazhinji haazomboona mwenje wezuva. Saka, injini dzekutsvaga dzinoshandura algorithm yayo uye huchenjeri hwese hwe yayo yekutsvaga injini.
Mubvunzo wekutsvaga hauchakwanisi zvichibva pane izvo chete zvinotsvakwa nemushandisi. Panzvimbo iyoyo, makambani akafanana neGoogle chinhu mune zvimwe zvakasiyana. Nekufamba kwenguva, zvirimo zvakakura kubva pakungofananidza mazwi nekufunga kwekuchenjera. Nenzira iyi, mazwi akapererwa anogadziriswa, uye mazwi ane chekuita nawo anoratidzwa.
Zviri mukati zvinokuratidza mabatiro anoita Google webhusaiti yako. Vanozviona sosi yakasarudzika here kana kuti kwete? Pano, iwe unokwanisa kutarisa iyo chaiyo chikamu chekuti unosarudzika sei nezvako. Tese tinoda kuve takasarudzika kana akasiyana, uye chimiro ichi chinotibatsira kuzviita. Nezvinhu zvirimo, iwe unodzidza kuti ndezvipi zvikamu zvezvinyorwa zvako zvakatsanangurwa, uye iwe unowana chidimbu mune iro rekutanga bhuku.
Hapana munhu chitsuwa, saka tarisira kuona zvishoma. Iri ibasa redu, zvakadaro, kuita kuti mavara ako ave akasiyana uye akakosha sezvazvinogona. Kunyangwe iwe unounganidza data kubva kune zvimwe zvinyorwa, iwe unofanirwa kuzviita zvako, wedzera zvishoma zvako uye kambani mazviri. Izvi zvinofamba nenzira refu pakubatsira vaverengi vako kuti vabatane zviri nani kukambani yako uye rudzi.
Ne yedu yekushandisa-inoshamwaridzana interface, tinogona kubata akawanda mawebhusayithi panguva. Nekuendesa maseru ako kana ma URLs kuGoogle, tinogona kuongorora maitiro avo nyore. NeGoogle webmaster, iwe une zvese zvekushandisa zvaunoda kuongorora uye kugadzirisa saiti yako. Kuti unakidzwe nemasevhisi eGoogle webmaster, unofanirwa kutanga wagadzira account. Google webmaster chishandiso chakakosha chebudiriro chero ipi webhusaiti. Izvo zvinosvika kusvika pakuratidza iwe kuti webhusaiti yako inoita sei pamafoni uye mahwendefa, ona mamwe masosi anobatana neyako, uye inoongorora zvaunobvunza.
Google webmaster inogona kutarisa sei kushanda kwewebhu webhusaiti?
Izvo zvinozivisa kuti Google inogona kupinda mune zviri pawebhusaiti yako
Inotendera iwe kuwedzera uye kubvisa mapeji ewebhusaiti yako
Inobatsira iwe kuongorora webhusaiti yako uye kuwana nzira dzekupa chiitiko chiri nani kune vako vaverengi.
Iwe unogona kuchengetedza webhusaiti yako pasina kukanganisa kukanganisa kwayo kuvapo mukutsvaga mhinduro.
Unogona kuwana nekubvisa malware kana spam matambudziko anogona kunge akatsvedza kuburikidza nemarara kana ukatsvaga chero imwe nzira.
Google webmaster chishandiso chakakosha kana uchiongorora mawebhusaiti. Zvinotiratidza kwatinofanira kuita uye zvekuita.
Izvi zvinoongorora nekukurumidza kuti mapeji ako ewebhu anotakura sei. Google inoshandisa ongororo iyi kuona kana mapeji ako kana webhusaiti achizadzisa zvinodiwa neGoogle. Pano, iwe unoratidzwawo zvikanganiso zviripo zvauchazoda kugadzirisa pane yako webhusaiti uye maitiro ekugadzirisa zvakanyanya mawebhusaiti ako.
Kazhinji, iwe waizoda webhusaiti iyo inotakura mapeji nekukurumidza. Chero chipi zvacho chakareba kupfuura gumi masekondi chinotanga kunzwa kunge zuva rese. Ichi chikonzero nei kukurumidza kurodha mawebhusaiti zviri nani kwauri iwe nevataridzi vako. Google inoda kuti vashandisi vayo vafare, zvinoreva kuti vanoda webhusaiti nekukurumidza. Saka webhusaiti yako inofanirwa kukurumidza sezvinobvira kuti Google iite saiti yako webhusaiti. Uye isu tinoda izvi kuti webhusaiti yako ioneke pane yekutsvaga yepamusoro, ichipa bhizinesi rako mikana yakawanda yekukura.